AFRIKA: Dal ay madaxdiisa sare ka badan yihiin inta neef-siiye ee uu haysto (Somalia halkee ku jirtaa?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka AFRIKA: Dal ay madaxdiisa sare ka badan yihiin inta neef-siiye ee uu...
AFRIKA: Dal ay madaxdiisa sare ka badan yihiin inta neef-siiye ee uu haysto (Somalia halkee ku jirtaa?)
(Hadalsame) 19 Abriil 2020 – Qalabka caafimaad ee ugu muhiimsan la tacaalidda Covid-19 oo ah neef-siiyaha ayaa aad ugu gabaabsi ah qaaradda Afrika:
Sida ay sheegtay Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, wax ka yar 2,000 oo neef-siiye ayaa yaalla 41 dal oo Afrikaan ah, lana soco Afrika oo dhami waa 54 dal, sida uu qoray Washington Post.
Wasaaradda Caafimaadka Somalia weli hal xabbo xitaa ma haysato. Dalka Central African Republic wuxuu haystaa 3 xabbo. Waxaa ugu qosol badan, dalka South Sudan oo leh Madaxwayne Xigeenno (5) ka badan inta neef-siiye oo ay haystaan oo ah 4 xabbo.
Nigeria, oo ay dadkeedu 100 milyan dhaafeen waxay haysataa wax ka yar 100 xabbo. Somalia MW Xigeen iyo neef-siiye midna ma hayso. Waxay taasi sheegaysaa sida xilka madaxdu uga mudan yahay waxqabadka.
Somalia waxaa kusoo maqan 200 oo sariirood oo ah kuwa Daryeelka Deg Degga ah (ICU) iyo dhowr neef-siiye, kuwaasoo uu ku deeqay bilyaneerka Chinese-ka ah ee Jack Ma, ee iska leh Alibaba, kaasoo 500 oo neef-siiye ugu deeqay Afrika, balse inay yimaadaan waxay qaadanaysaa dhowr todobaad.
Kaabayaasha caafimaad ee dalka Somalia waa mid ka mid ah kuwa ugu liita qaaradda caalamka, iyadoo uu hal dhakhtar kusoo aadayo 100,000 oo qofoodba, kuwaasoo inta badan ku sugan caasimadda Muqdisho.
Waxaa intaa dheer in meelaha ka baxsan magaalooyinka waawayn iyo gobollada qaar ay xukumaan kooxda Al Shabaab, kuwaasoo aan wax adeeg ah umadda u haynin in loo keenana aad u adkeeynaya, sida uu qorayo The Post.
Somalia oo todobaad kahor uun bilowday inay iyadu baarto cudurka Covid-19, welina aan agab ku filan iyo aqoon u haynin baaritaan guud ayaa waxaa dhibaato kale ku haya dadka oo weli cudurka dhayalsanaya ama xogo been ah isla dhex maraya.
Arrintan ayaa si kastaba cashar lama illoowaan ah u noqon doonta madaxda musuqa ah ee qaaradda feceed ka hartay ee Afrika.
Previous articleDEG DEG: Ciidamada Libya oo sheegay inay soo rideen dayuurad dagaal oo Imaaraati ah
Next articleKASHIFAAD: Ingiriiska oo dadka ka qarinaya XOG xasaasi ah oo ku saabsan Covid-19 (Dalal kale oo…)